आइसक्रिम मिठाई दाँत मदत गर्न scoop
आइसक्रिम - धेरै मानिसहरू संसारमा सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु बिना बाँच्न सक्दैन। हालै, सबै सामान्य खाने आइसक्रिम चम्मच र पनि यो मिठाई मात्र होइन एक स्वादिष्ट व्यवहार, तर पनि तालिकाको एउटा सुन्दर सजावट हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई विचार छैन। धेरै वजन द्वारा बेचिएको को आइसक्रिम अनियमित टुक्रा, तर कुनै पनि पकवान कुनै पनि तालिका मा उत्कृष्ट हेर्न भनेर सुन्दर र चिटिक्क बलमा मात्र होइन आपूर्ति गर्न सकिन्छ आशा गर्नुभएन। हालै सम्म, आइसक्रिम बलमा मात्रै विशेष प्रशिक्षित शेफ धेरै तरिकाले मिठाईहरू लागि बरफ-क्रीम कटोरे को एक किसिम उहाँलाई राखे छन् क्याफे र रेस्टुरेन्ट, मा देख्न सकिन्छ। आज, आइसक्रिम निर्माताहरु को व्यञ्जन सबै प्रेमीहरूको लागि मिठाई सर्विंग्स dosing को प्रक्रिया सरलीकृत जो एक विशेष भान्सा बर्तन चम्चा सहायक, साथ आएका छन्। यो चम्चा सुन्दर र उत्तिकै आकारको बलमा उत्पादन डिजाइन गरिएको छ। चम्चा आइसक्रिम उच्च-बल सामाग्री को एक किसिम ले गरेको छ।
त्यहाँ चम्मच विभिन्न प्रकारका छन्, डिजाइन र आकार को एक विशाल विविधता तपाईं विभिन्न विन्यासको मोती गर्न अनुमति दिन्छ। यी मुख्य रूप उच्च बल एल्यूमीनियम मिश्र धातु र प्लास्टिक को विशेषताहरु उत्पादन। गृह प्रयोगको लागि प्लास्टिक को बनाइएको चम्चा किन्न पर्याप्त हुनेछ। टिकाऊ स्टेनलेस स्टील को छन् भनेर व्यावसायिक उपयोग बढी उन्नत चम्मच लागि उपयुक्त। गैर-पेशेवरहरुको लागि एक चम्चा संग आइसक्रिम को उत्खनन प्रक्रिया सुविधा भनेर विभिन्न उपकरणहरू छन्। यी एक बाइपास संयन्त्र वा गरम संग आइसक्रिम एक चम्चा समावेश गर्नुहोस्। यी उपकरणहरू यो चम्चा को धातु पर्खालहरु गर्न आइसक्रिम छडी अनुमति छैन।
विशेष निकालेको संयन्त्र सुसज्जित छ जो एक चम्चा, संग, तपाईं एक चिटिक्क बलमा मात्र होइन आइसक्रिम, तर पनि आलु, चामल र अन्य नरम खाद्य पदार्थ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। आइसक्रिम scoop फल सलाद को उत्पादन मा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई पुरा फल लुगदी को बलमा गठन वा विभिन्न सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ फल देखि सजावट आइसक्रिम नै लागि। बाल्टिन उपकरण आकार नै, राउन्ड बलमा गर्न अनुमति दिन्छ। बेदखलदार संग चम्चा आइसक्रिम तपाईं धेरै खुशी साथ र धेरै प्रयास बिना असामान्य व्यञ्जन सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। यो उपकरण तत्काल र सही सिद्ध बल आकार प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। आइसक्रिम चम्चा क्याफे, बारहरू र रेस्टुरेन्ट मा, तर पनि कुनै पनि घर को भान्सा मा मात्र होइन आवश्यक छ। यो तपाईं सुन्दर मिठाईहरू संग अतिथि खुसी पार्न मद्दत गर्नेछ। कसरी, आइसक्रिम लागि चम्चा प्रयोग गर्न निर्देशन अतिरिक्त को जोडनु बताउन सिक्न। प्रयोग तातो पानी मा moisten गर्न आवश्यक छ अघि तर सजिलो स्लाइड चम्चा लागि भनेर सम्झना। यो प्रक्रिया प्रत्येक भाग केही राख्दै पछि पटक-पटक गर्नुपर्छ। राम्रो स्लाइड चम्चा उत्पादन उत्तरार्द्ध लागि पनि peremorozhennymi हुँदैन।
के समीक्षा छोराछोरीको पाउडर "टाइड" (टाइड) हुन्छ? को धुने छोराछोरीको लुगा? फस्फेट-मुक्त लुगा धुने पाउडर
केतली Braun WK-500: समीक्षा, वर्णन
थोमस संग Brazier खडा - समीक्षा, निर्देशन, मूल्य, फोटो
Curlers जादू लाभ: सन्तुष्ट खरीदारों को समीक्षा - गुणस्तर को सबै भन्दा राम्रो प्रमाण
"पन्नी" - ब्लेड: विवरण, फोटो
त्रिएकको भोजमा: सीमा। त्रिएक: परम्परा र संस्कार
Slab जग: लाभ
कसरत Bubnovskaya - आफ्नो मौका ठूलो महसुस गर्न!
मोन्टेनेग्रो, टिभत: भ्रमणहरू, इतिहास र रोचक तथ्यहरू
मौरीले गर्न कांडी: को नुस्खा। को हिउँदमा मौरीले को शीर्ष लाउने: मौरी पालन को पाठ